माधव पक्षमा नगएका सांसदले पनि किन छाडे ओलीको साथ ? « Sansar News
माधव पक्षमा नगएका सांसदले पनि किन छाडे ओलीको साथ ?
४ श्रावण २०७८, सोमबार १२:५३
साउन ४, काठमाडौं । नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई उनको पक्षमै देखिएका सांसदहरुले पनि साथ दिन छाडेका छन् । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विश्वासको मत लिन आइतबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा राखेको प्रस्तावमा ओली पक्षमै मानिएका ९ सांसदले ओलीको निर्देशन विपरित मत हालेका थिए ।
ओली पक्षमा भनिएका एमालेका सांसदहरु पार्वती विशंखे, हिराचन्द्र केसी, कृष्ण श्रेष्ठ (किसान), गोपाल बम, प्रेम आलो, धनबहादुर बुढा, बिनादेवी बुढाथोकी, कलिला खातुन र समिना हुसेनले देउवालाई विश्वासको मत दिएका थिए ।
एमालेका १२१ सासंमध्ये ओलीको निर्देशनको पक्षमा मात्रै ८३ सांसद उभिएका थिए । ८३ सांसदले मात्रै गठबन्धनबाट प्रधानमन्त्री बनेका देउवाको विपक्षमा मतदान गरेका थिए ।
जनमतको कदर गर्न देउवालाई भोट
अहिले एमालेको ओली पक्षमा निकै ठुलो अन्यौंलता जन्मिएको छ । ओली पक्षमा देखिएका र यसअघि पनि लाभका पदमा पुगेका सांसदहरुले समेत ओलीलाई साथ दिन छाडेका छन् ।
आइतबार भएको मतदान ओलीबाट विभिन्न समय लाभ उठाएका सांसदले देउवाको पक्षमा मत हालेका थिए । ओलीले यसअघि मन्त्रीसमेत बनाएका प्रेम आले पनि उनको विपक्षमा उभिएका थिए ।
ओलीको विपक्षमा उभिएका सांसद प्रेम आलेले यसबारे प्रतिक्रिया त दिएनन् तर, दैलेखकी सांसद पार्वती विशंखेले भने ओलीको तानाशाही र निरंकुश चरित्रलाई जवाफ फर्काएको बताइन् । संसार न्यूजसँग कुराकानी गर्दै उनले आफुँमाथि कारबाही हुनसक्ने सम्भावनालाई देख्दै संसद बचाउन र जनमतको कदर गर्न देउवालाई मत दिएको बताइन् ।
‘उहाँ (ओली)ले पटक–पटक जनमतमाथि लात्ति हान्ने काम गर्नुभयो, गत वैशाख २७ मा संसद जोगिन्छ कि भनेर उहाँलाई नै मत दिएकी थिएँ । तर, उहाँले फेरि घुमाईफिराई निरंकुश शैलीमा जनमतमाथि लात्ति हान्नुभयो’, सांसद विशंखेले भनेकी छिन्, ‘मैंले मत देउवालाई होइन् संसद जोगाउन दिएकी हुँ ।’
उनले आफुँमाथि कारबाही भए सुरुमा ओलीमाथि कारबाही हुनुपर्ने बताइन् । ‘सुरुमा कारबाही ओलीमाथि हुनुपर्छ, पटक–पटक संसदको हत्या गर्न खोज्ने उहाँमाथि कारबाही भए म पनि पार्टी निर्देशन बाहिर गएको भनि भोग्न तयार छु’, विशंखेले भनिन्, ‘०७५ साल जेठ मा हाम्रो पक्षमा कति सांसद थिए, पार्टी कस्तो थियो, अहिले के भयो, यो सबैको समिक्षा हुनुपर्छ, यदि मलाई कारबाही हुन्छ भने सबभन्दा पहिला यी सबैका निम्ति उहाँलाई कारबाही हुनुपर्छ, हामी भोग्न तयार छौं ।’
ओरालो यात्रामा छन् ओली
२०७४ को फागुनमा बाम गठबन्धनको तर्फबाट झण्डै दुई तिहाई बहुमतको समर्थनसहित प्रधानमन्त्री बनेका ओली झण्डै तीन वर्षको सत्ता यात्राबाट भने निकै कमजोर बनेर निस्किएका छन् । तत्कालिन समय नेकपा (एमाले)को १२१, माओवादी केन्द्रको ५३, राजपा १७ र फोरमका १६ सांसदको समर्थनसहित उनी सरकारको नेतृत्व सम्हाल्न पुगेका थिए ।
सरकार गठन र एमाले–माओवादी एकतासँगै निकै शक्तिशाली देखिएका ओली अहिले किनारामा देखिएका छन् । अहिले ओलीसँग न तत्कालिन समयको पार्टी छ न संसदमा बलियो उपस्थिति । ओली आफ्नै भनिएका सांसदको पनि समर्थन नपाउने स्थितिमा पुगेका छन् ।
अंकगणितमा तीन वर्षअगाडि झण्डै ६४ प्रतिशत जनमतको नेतृत्व गरेका ओली अहिले करिब ३० प्रतिशतमा खुम्चिएका छन् । उनको पक्षमा एमालेकै जम्मा ८३ सांसद देखिएका छन् ।
घमण्ड र अहंकारले सिद्धिएकाे इतिहासमा ओली
ओली कमजोर बन्नुको पछाडि उनमा पलाएको घमण्ड र अहंकार बाहेक केहि होइन् । पार्टीभित्र उनले चलाएको निरंकुशता र सत्तामा बसेर उनले गरेको राईँदाईँ सबैभन्दा घातक उनकै निम्ति बनेको छ ।
ओलीले पार्टीभित्र न माओवादी पक्षलाई सहि व्यवस्थापन गर्न सके नत माधव पक्षलाई । उनले सबैमाथि शक्ताको बल प्रयोग गर्दै हानिरहे । ओलीको निरंकुशताका कारण नै तत्कालिन नेकपा विभाजित बनेको थियो । नेकपा खारेजपश्चात ब्यूँतिएको एमालेमा पनि उनले माधव पक्षमाथि उसैगरि निरंकुशताको डण्डा चलाएका थिए । जसको प्रतिफल ओली आफैंले भोगिरहेका छन् ।
ओलीलाई एक पछि अर्को गर्दै सांसदहरु छाड्नु पनि उनिभित्रको चरम अहंकार नै हो । एमाले नेता योगेश भट्टराईका अनुसार पनि ओलीको अहंकार नतोडिने हो भने एमाले सकिन्छ ।